Ny Vehivavy no Tena Mizaka ny Krizy Ao Venezoelà · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Septambra 2018 12:40 GMT
Vakio amin'ny teny Ελληνικά, Español, русский, Português, Nederlands, Français, македонски, Deutsch, Italiano, English
“Fanolorana an'i Patricia, rahavaviko, ilay tena Vehivavy Mahagaga. Reny miady irery mamelona zaza roa, misahana ny fandraharahany miaraka amin'ny kihon-tongotra tapaka efa ho sivy volana izao. Maty tao anatin'ireo savorovoro sy hetsipanoherana tao Venezoelà i dadanay, ary noho i Patricia tsy afaka miasa, mbola mikiry manohy hatrany mihoatra noho izay olona fantatro izy. Paotsatroka ary maneho fanajàna kidaladala ho an-dramatoa io. Raha mitaha aminy, kabaosy aho.” Sary fanaingoana sy maribolana nataon'ilay venezoeliàna mpanakanto, Leonardo Gonzalez, fampiasàna nahazoana alàlana
Misy endrika iray amin'ny krizy ara-toekarena venezoeliàna izay mazàna no tsy resahana: ny fiantraikany amin'ireo vehivavy sy ankizivavy.
44 isanjato amin'ny tokantrano ao amin'ny firenena no eo ambany fiahian'ny vehivavy, amin'ny ankapobeny dia izy ireo no mizaka ireo filaharambe eny amin'ny toerana fivarotana, mizaka ny vesatry ny rafitra mandringa natao ho fiahiana ara-pahasalamana rehefa lavon'ny aretina ny iray amin'ireo malalany, ary misaona ny fahafatesan'ny zanany eny an-tànan'ny polisy — no sady miezaka ny ho tafavoaka velona amin'ireo antontanisa mahatsiravina momba azy ireo.
Raha marina fa nandany politika mikendry ny hampihena ny fahantran'ireo vehivavy ny governemanta ao Venezoelà, natao tsinontsinona kosa ireo endrika maro hafan'ny fizakantenan'ny vehivavy, na eo aza ny filazàny matetika ho ‘mandàla ny maha-vehivavy’.
Nanome vatsy fiantohana mivaingana ho an'ireo fianakaviana miaina anaty fahantrana lalina ireo fandaharanasa ho fanatsaràna ny fidirambola, toy ny Madres del Barrio (“ireo reny eny amin'ny tanàna tsizarizary”), nanomboka tamin'ny 2006, sy ny Hijas e Hijos ao Venezoelà (ankizin'i Venezoelà), nanomboka tamin'ny 2011. Izy roa miaraka no manome eo amin'ny 150-350 USD eo ho eo, miankina amin'ny isan'ny ankizy.
Etsy andaniny, nambara ho tsy araka ny lalàna ny fanalanjaza tao anatin'ny Lalàm-panorenana Bolivariana ao Venezoelà, nolovaina avy amin'ny rafitra politika nitondra ny firenena tany aloha, izay nohitsakitsahan'ireo Bolivariana. Tsy nisy, na i Chávez na i Maduro, mba nanao ezaka ho fanovàna azy io nandritra ny 20 taona naha-teo amin'ny fitondrana azy ireo. Raha sanatria manohintohina ny ain'ilay reny, amin'izay tranga izay ihany vao mahazo alàlana ny fanaovana fanalanjaza.
Aglaia Berlutti, feminista fantadaza ety anaty tambajotra no sady mpandray anjara ato amin'ny Global Voices, no manasongadina ireo fifanoherana misy amin'ny kabary fandresena lahatry ny Chavismo rehefa resaka miralenta no atao:
Ao Venezoelà ny fomba fiteny hoe ‘feminisma’ dia nampiasaina fahatany, noararaotina ary ambonin'ny zavatra rehetra, navilan’ [ireo eo amin’] ny fitondràna. […] Raha resaka fisoloana tena ara-politika no ataon-dry zareo, fomba fiteny manavakavaka ny lahy sy ny vavy no ampiasain'ny filoha Nicolás Maduro mba handranitana ireo vitsy an'isa […] Raha sady misisika ihany milaza ry zareo hoe raha ny isan'ny vehivavy mitàna toerana minisitra ao anatin'ny sampana mpanatanteraka dia mihoatra ny an'ireo firenena hafa ato anatin'ny tanibe, mitohy mizaka toedraharaha fanitsakitsahana ny fitoviana lenta tokony hositrahany ireo vehivavy, fanimbazimbàna ataon'ny fomba fandikàna ara-tantara mampietry azy ireo.
Tsy hoe fotsiny tsy vita ny niatrika ireo olana efa nisy tany aloha: miaraka amin'ny krizy ara-toekarena, vao mainka izy ireny niharatsy dia niharatsy tokoa.
Araka ny nambaran'ireo fikambanana telo mpanaramaso ao an-toerana, ny tahan'ny famonoana vehivavy ao Venezoelà izao no isan'ny ao anatin'ireo 15 ambony indrindra eto an-tany. Marobe ireo tranganà fanararaotana ara-nofo nanjo ny vehivavy, nataon'ireo manampahefana napetraka hampihatra ny lalàna, no voatatitra nandritra ireo hetsipanoherana tamin'ny 2017.
Nahatratra 56 amin'ny olona 100.000 ny tahan'ny famonoana olona tao Venezoelà tamin'ny 2016 — ny avo indrindra any Amerika Atsimo, araka ny tatitry ny Departemantan'ny Firenena Mikambana misahana ny raharaha Zavamahadomelina sy ny Heloka Bevava (UNDOC), izay mamoaka isantaona ireo andianà angondrakitra manerantany miresaka ny tahan'ny vono olona. Ny Venezuelan Observatory of Violence (OVV) izay mampiasa fomba iray hafa, dia naharakitra 89 tamin'ny 2017, izay mety hametraka an'i Venezoelà ho ny firenena tena mpamono olona indrindra eto an-tany.
Mbola araka ny OVV hatrany, tamin'ny Jolay 2018, 40% tamin'ireo heloka bevava tao Caracas Lehibe no heloka nataon'ireo manamboninahitra avy amin'ny polisy.
Niaraka tamin'ny fitomboan'ny heloka bevava sy ny herisetra nataon'ny polisy tato anatin'ny taona vitsivitsy lasa, betsaka ireo vehivavy misaona noho ny famoizana ny zanak'izy ireo. Raha niresaka tao amin'ny La vida de nos (“ny fiainanay”), tetikasa media ety anaty tambajotra manangona ireo fitantaràna manokana momba ny krizy, tantarain'i Elibeth Pulido ny namonoana ireo zanany roa, ny iray novonoin'ny manamboninahitra iray avy amin'ny polisy:
Telopolo minitra taty aoriana, niiantso ahy ry zareo fa haka ireo zanako. Tsapako ho toy ny hitresaka ny foko raha nahita azy ireo ary izy ireo nahita ahy. Tsy nampino ireo topimaso nifanakalozanay. Tsy mbola nifampijery toy izay mihitsy izahay hatramin'izay! Tsy nikiraro ry zareo ary tsy niakanjo ny ambony […Avy eo] nomen'izy ireo ahy ny vaovao iray isan'izay nampihoron-koditra indrindra teo amin'ny fiainako. Nitranga indray mandeha indray: nalain-dry zareo indray ny zanako iray hafa.
Fanampin'izay, ny tsy fahampiana efa raikitampisaka amin'ny resaka fanabeazana ara-pananahana any an-tsekoly, laroin'ny zara fa fahafahana miditra amin'ny fanabeazana aizana vokatry ny tsy fahampian'ny fanafody ao amin'ny firenena, dia asehon'ny isa ambony be amin'ny vohoka tsy niriana. Adícea Castillo, mpikaroka sady mpikambana mpanorina ny Ivontoerana Fianarana ny Vehivavy ao amin'ny Anjerimanontolo Foibe ao Venezoelà, manazava hoe:
Misy tarehimarika iray. Kely saingy manandanja be, momba ireo reny tsy ampy taona […] Kiboribory manafintohina io. Marobe amin'ireny reny tsy ampy taona ireny no tsy mampiasa fanabeazana aizana, manao fanalanjaza [tsy voaaro]. Maty noho ny fihomboan'ny aretiny ry zareo aorian'ny valo volana nidirany hopitaly, ary ireo tafavoaka velona indray, miverina mody any amin'ireo tanàna tsizarizary mba hikarakara zaza iray tsy misy fanohanan-dray sy reny.
Farany, misedra fahasahiranana ihany koa ireo vehivavy mandao ny fireneny. Nitombo avo efatra heny ny isan'ireo vehivavy Venezoeliàna niharan'ny fanondranana olona tao Amerika Latina sy Eoropa, teo anelanelan'ny 2014 sy 2018.
Ao Kolombia mpifanolobodirindrina aminy, firenena iray izay nandray Venezoeliàna maherin'ny iray tapitrisa tamin'ny taona lasa, iharan'ny fanararaotana sy toetra mamohehatra ireo vehivavy. Raha maro ireo miampanga ny Venezoeliàna mpifindra monina ho “mangalatra” ny asan'ireo olona eo an-toerana sy ho mpanao heloka bevava, mazàna kosa no toy ny mpampanofa vatana no ijerena ireo vehivavy.
Mba hiatrehana ny betsaka amin'ireny hadisoan-kevitra ireny, ny fantsona Youtube feminista “Las igualadas”, dia nanao fizaràna iray manokana tao Cúcuta, tanàna Kolombiana iray any an-tsisintany, momba ireo Venezoeliàna (amin'ny teny Espaniola, tsy nasiana dika amin'ny teny anglisy).